चार बर्षमा छ करोड कमाउने "सुब्बा साप" जेलमा ! - Jagaran Post
चार बर्षमा छ करोड कमाउने “सुब्बा साप” जेलमा !
Jagaran Post ३ असार २०७९, शुक्रबार १८:५७
बिर्तामोड, झापा – चार बर्षमा छ करोड कमाउने “सुब्बा साप” जेलमा पुगेका छन्।
स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान झापाका तत्कालीन वरिष्ठ व्यवस्थापन सहायक भीमकान्त भण्डारीविरुद्ध ६ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भण्डारीमाथि ६ करोड २४ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगसहित आज शुक्रवार विशेष अदालत काठमाण्डौमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारको साख रसातलमा पुर्याएर आज बिदा हुँदैछन प्रमूख आयुक्त घिमिरे
भण्डारी २०७३ साल असोज २१ देखि २०७७ साउन १ गतेसम्म मात्रै सरकारी सेवामा थिए। नासु सरहको वरिष्ठ व्यवस्थापन सहायक पदमा काम गरेको जागिरको अवधिमा उनले २६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेका थिए। तर उनको खर्च र लगानीतर्फ (जग्गा खरिद, बैंक तथा हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर खरिद तथा बैंकमा जम्मा रकम) सहित ६ करोड ५० लाख ६५ हजार ६ सय ४२ रुपैयाँ पाइएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
अख्तियारलाई लेखाले सोध्यो – ‘वाइडबडी र सेक्युरिटी प्रेसको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ?’
भण्डारीले यो अवधिमा पारिश्रमिक, श्रीमतीको तलबबाट बचत, सञ्चय कोषबाट लिएको ऋण र जागिर सुरु हुनुभन्दा अघिको बचतलाई समेत देखाएर आफूले कानुनसम्मत आर्जन गरेको दाबी गगरेका थिए। तर अख्तियारले त्यो दाबीलाई स्वीकार गरेन र ६ करोड २४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको निष्कर्ष निकालेको हाे ।
विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा अख्तियारले ६ करोड २४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ ।
गोकुल बाँस्कोटाकै मान्छेद्वारा अख्तियारको भेषमा संचार मन्त्रालयमा छापा
भण्डारीकाे सम्पत्तितर्फ ६ करोड ६ लाख ४१ हजार आठ सय १३ रुपैयाँ र अपुग १७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ उहाँको एकल स्वामित्वमा रहेको कम्पनीबाट जफत गर्न माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन्।
यौन शोषणमा परेकी एक युवतीका लागि न्याय माग्दै